စွမ်းရည်:300-400ကီလိုဂရမ် / နာရီ
အကောင်းဆုံးရေပေါ်ငါးအစာစက်ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်,ရေပေါ်ငါးအစာစက်နှစ်မျိုးထုတ်လုပ်သည်,တစ်ခုမှာခြောက်သွေ့သောငါးအစာစက်ဖြစ်သည်,အခြားတစ်ခုမှာစိုစွတ်သောငါးအစာထုတ်စက်,ဤအမျိုးအစားသည် STAINLESS STEEL HIGH-END အဆင့်မြင့်နည်းပညာဖြင့်ငါးအစာကျွေးသောစက်ဖြစ်သည်။,ငါးအစာကျွေးသည်,အခြားငါးအစာနှင့်လည်းထုတ်လုပ်နိုင်သည် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အစာ ခွေးအစားအစာလို,ကြောင်အစာ.
ရေပေါ်ငါးအစာတောင့်သည်ခေတ်မီစီးပွားဖြစ်ငါးမွေးမြူရေးတွင်လူကြိုက်များသောအစာဖြစ်သည်, ငါးအမျိုးမျိုးနှင့်တောင့်များလိုအပ်သည့်မျှတသောအာဟာရကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းသည်ငါးမွေးမြူရေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်. သို့သော်စျေးကွက်တွင်အစာတောင့်များ၏ဈေးနှုန်းမြင့်မားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်, လယ်သမားများစွာသည်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက်အလုံးလေးများထုတ်လုပ်ရန်ငါးအစာစက်ကိုဝယ်ယူလေ့ရှိသည်. ဤတွင်ခြောက်သွေ့သောမျောနေသောငါးအစာကိုအကြံပြုသည် ငါးအစာထုတ်လုပ်မှု, ၎င်းသည်ကုန်ကြမ်းများရေနွေးငွေ့အေးစက်ခြင်းမရှိဘဲအရည်အသွေးမြင့်မားသောရေပေါ်ငါးများကိုထည့်သွင်းပေးသည့်အထူးကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်. ခါးပတ် drive အားဖြင့်အဆင့်မြင့်တစ်ခုတည်းဝက်အူ extruder နှင့်အတူ, ရေပေါ်ငါးအစာစက်သည်အသေးစားနှင့်အလတ်စားအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများနှင့်ငါးမွေးမြူရေးခြံများတွင်အကောင်းဆုံးကိရိယာဖြစ်သည်.
1 . ဤမျောပါသောငါးများအားအစာကျွေးနိုင်သောစက်ကို STAINLESS STEEL ဖြင့်ပြုလုပ်သည်.
2. Dingrun သည်သင့်လိုအပ်ချက်အရအခြေခံငါးအစားအစာဖော်မြူလာကိုထောက်ပံ့ပေးသည်.
3. tish floating ငါးအစာကျွေးစက်သည်ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားနှင့်နောက်ဆုံးတောင့်များ၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံသဏ္makeာန်စေနိုင်သည်.
4. ထုပ်ပိုးစက်ကိုငါးအစာထုတ်လုပ်ရေးလိုင်းနှင့်တွဲဖက်လုပ်ကိုင်နိုင်သည် (သင်၏လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်)
6. လျှပ်စစ်အပူပေးစက်ကိုအသုံးပြုသည်။ အစာကျွေးခြင်းနှုန်းတိုးစေပြီးအချိန်နှင့်အတောင့်အတောင့်တောင့်များကိုတိုးတက်စေသည်.
9. floating time ကို puffing ဒီဂရီညှိခြင်းဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်.
10. အလိုအလျောက်အပူထိန်းစနစ်သည်အပူချိန်ကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် parameter အားပိုမိုတိကျစေသည်.
1. လမ်းခွဲ: ကယူနီဖောင်းနှင့်တည်ငြိမ်သောအစာကျွေးသေချာစေရန်ဖြစ်ပါသည်, extrusion motor ၏လက်ရှိတန်ဖိုးအတိုင်းအစာကျွေးခြင်းပမာဏကိုချိန်ညှိပါ. ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည်မြန်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ပစ္စည်းအစာအရေအတွက်ပြောင်းလဲရန်လျှပ်စစ်သံလိုက်မြန်နှုန်းမော်တာသို့မဟုတ်ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲစက်ကိုအသုံးပြုသည်. နို့တိုက်ကျွေးသော Hopper ၏ထွက်ပေါက်ကိုများသောအားဖြင့်လိမ် ၀ င်သောဆွဲအားဖြင့် extruded section သို့ပို့သည်.
2. Extruding အခန်း: ကဝက်အူပါဝင်သည်, တစ်စည်, template တစ်ခု, ဒါအပေါ်တစ် ဦး ညှပ်နှင့်. အဆိုပါဝက်အူ, နှင့်စည် piecewise ပေါင်းစပ်နေကြသည်, extruded feed ၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ compression ဒီဂရီကိုချိန်ညှိနိုင်သည်, အဆိုပါ extruded feed ကို၏တိုးချဲ့ပြောင်းလဲပစ်ရန်အလို့ငှာ.
3. ချဲ့ထွင်မှုယန္တရား ပိုင်းခြားထားတယ်3၎င်း၏ function ကိုနှင့်အနေအထားအရသိရသည် segments များ:
♦ အစာကျွေးခြင်းအပိုင်း: ဤအပိုင်းကိုအတွက် screw နှစ်ခုအစေးကြီးမားသည်, ဒါကြောင့်အဓိကအားဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ချုံ့ပစ္စည်းများ, ဒါကြောင့်လိမ် groove feed ကိုပစ္စည်းနှင့်ပြည့်၏.
♦ ချုံ့အပိုင်း: ဦး တည်ချက်တွန်းနှင့်ပစ္စည်းချုံ့ပစ္စည်းတစ်လျှောက်ဝက်အူရေတိမ်ပိုင်း၏ slot က.
♦ ထုတ်ယူခြင်းအပိုင်း: ဝက်အူပိုပြီးရေတိမ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်, အစေးတဖြည်းဖြည်းသေးငယ်လှည့်, နှင့်ထုတ်လွှတ်မှုဖိအား 3.0-10Mpa အထိရောက်ရှိ, အပူချိန်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် 120-150 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်.
1. အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဆင့်မြင့် pelletizing ဖွဲ့စည်းပုံ, ပျော့ပျောင်းသောဓားမထိုက်မတန်ပုံစံအသုံးပြုခြင်း, stepless မြန်နှုန်းအောင်မြင်ရန်ရန်, ထုတ်ကုန်၏တပ်မက်လိုချင်သောအတိုအရှည်သို့ဖြတ်နိုင်ပါတယ်, burrs ထုတ်လုပ်ရန်မလွယ်ကူ.
2. ရေပေါ်ငါးအစာစက်ကိုဝတ္ထုနှင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်, ထူးခြား, ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံ, တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်ဖျက်ရန်ဖျက်သိမ်းရန်, လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသည်.
3. screws စုံနှင့် screw မ်ားအားအထူး wear -proof ခံနိုင်သောမြင့်မားသောအပူချိန်အလွိုင်းသံမဏိပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်, အပူကုသမှုမှို, wear နှင့်ရှည်လျားသောဘဝအားသာချက်များနှင့်အတူ.
4. ရေပေါ်ငါးအစာကျွေးသောစက်တွင်အစာထုတ်လုပ်မှုနှင့်အရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်ထူးခြားသောအာနိသင်တိုးမြှင့်သည့်ကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည်; နှင့်အစာကျွေးခြင်း puffing နှုန်းတိုးတက်စေရန်လျှပ်စစ်အပူကိရိယာနှင့်တပ်ဆင်ထားသည်.
5. အရည်အသွေးမြင့် Y စီးရီးသုံးဆင့်မော်တာကိုအသုံးပြုသောအဓိကမော်တာ, အားကောင်းတဲ့ပါဝါကိုသေချာစေရန်.
6. မြန်နှုန်းအစာကျွေးကိရိယာ, ပိုမိုအဆင်ပြေစစ်ဆင်ရေး, အညီအမျှအစာစားခြင်း, Bie စက်ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့
7. အစားထိုး template ကိုအစားထိုးရိုးရှင်းပါသည်, ကွဲပြားခြားနားသောအချင်း feed ကိုလိုအပ်ရုံလိုအပ်သော aperture template ကိုအစားထိုး.
8. floating pelletized feed ၏ထုတ်လုပ်မှုကိုအနည်းဆုံးမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်မျောပါနိုင်သည် 12 နာရီ, အစာခြေရန်လွယ်ကူငါးနှင့်ကြက်, အတုသည်ဖားနှင့်ငါးတို့၏စားသုံးမှုကိုအလွယ်တကူတွေ့ရှိနိုင်သည်, အစာအဆိပ်သင့်စေမည်မဟုတ်ပါ, ရေရဲ့အရည်အသွေးကိုမညစ်ညမ်းစေဘူး,
9. ဤရေပေါ်ငါးအစာစက်သည်ရေနစ်မြုပ်စေသောရေထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်, ကြက်တောင့်အစာကျွေး, အဆိပ်အတောက်အများဆုံးပါ ၀ င်သောပစ္စည်းများနှင့် Anti-trypsin နှင့်ဆီးအင်ဇိုင်းများ၏အာဟာရချို့တဲ့သောအချက်များပါ ၀ င်သည်။,ဘယ်တိရိစ္ဆာန်အစာခြေခြင်းနှင့်စုပ်ယူအထောက်အကူပြုသည်, အာဟာရဓာတ်၏အစာခြေခြင်းနှင့်အသုံးချတိုးတက်လာသည်.
မော်ဒယ် စွမ်းရည် (t / h) စွမ်းအား
(မီလီမီတာ) စွမ်းအင်ဖြတ်တောက်(kw) အေးစက်ပါဝါ
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ -၅၅ 0.12-.015 11 0.55 50 0.55 1.5 450
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ -၅၅ 0.18-0.2 15 0.75 60 0.75 2.2 480
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ -၅၅ 0.25-0.30 18.5 0.6 75 0.63940
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ -၅၅ 0.35-0.40 22 1.1 85 0.7531000
ဓာတ်ငွေ့ -95 0.50-0.60 30 1.1 95 1.132000
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ -100 0.60-0.70 37 1.1 100 1.1 3.5 2100
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ -125 0.70-0.80 55 1.1 125 1.5 3.5 2200
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ -135 1.0-1.2 75 1.5 135 2.242500
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ -161 1.8-2.0 90 2.2 160 2.243800
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ - 200 3.0-4.0 132 2.2 200 3.0 5.5 4500